Olee otú mbubata MTS ka Final Cut Pro maka edezi
> Resource> FCP> Olee mbubata MTS ka Final Cut Pro maka edezi
MTS / M2TS ọtụtụ dị na AVCHD obere vidiyo dere si camcorders nke Panasonic, Sony, JVC, na Canon. Ndị a MTS / M2TS faịlụ na-natively-akwado site na Final Cut Pro. Ma na-emekarị, i nwere ike na-abịa gafee ị nwere ike ghara mbubata M2TS / MTS ka Final Cut Pro maka edezi. Kpatara nke a bụ gị M2TS ma ọ bụ MTS faịlụ-apụghị Ofụri Esịt dakọtara na Final Cut Pro.
Isiokwu a mgbe ahụ ga-abụ gị dị ukwuu inyeaka na-egosi gị otú ị tọghata MTS ka Final Cut Pro kpamkpam dakọtara faịlụ na nzọụkwụ site nzọụkwụ. Iji na-video àgwà nakwa dị ka Rụchaanụ MTS Final Cut Pro ọrụ dị ka ngwa ngwa o kwere omume, a Video Ntụgharị maka Mac bụ na iji. Dị nnọọ download na wụnye ya, wee soro atọ nzọụkwụ n'ihu gị mbubata faịlụ gị FCP maka edezi:
1 Import MTS faịlụ ka MTS ka Final Cut Pro Ntụgharị
Ọ bụ na-echebara ekwe ka ị na ozugbo ịdọrọ na dobe gị camcorder faịlụ n'ime Mac ngwa n'ihi na-amalite gị MTS ka FCP akakabarede. Dị nnọọ jikọọ gị camcorder, na mgbe ahụ na-agba ọsọ a usoro. Ozugbo, ọ ga-chọpụta ngwaọrụ, na ị pụrụ ịhụ ihe niile e dere MTS faịlụ na ihuenyo. Dị họrọ faịlụ na ị chọrọ, na pịa "Ibu Ibu" button mbubata ha.
Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ MTS faịlụ na wanna jikota ha n'ime otu maka na-a na-aga n'ihu faịlụ, ị nwere ike ịlele "jikota" nhọrọ na ala nke isi interface nke MTS ka Final Cut Pro Ntụgharị.
2 Set Final Cut Pro dakọtara format dị ka mmepụta format
N'ihi nke na-azọpụta gị oge ahụ, MTS ka FCP ngwa na-enye ihe kachasị preset maka Final Cut Pro mere na ị pụrụ ozugbo họrọ ya n'okpuru "edezi" ngalaba dị ka gị mmepụta usoro.
3 Malite iji tọghata MTS ka Final Cut Pro
Pịa "tọghata" na mgbe ndị fọdụrụ ga-arụzu-akpaghị aka. Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịchọta mmepụta faịlụ gị Mac, na mgbe ahụ ọma mbubata ha ka ha Final Cut Pro maka video edezi. The Mac ngwa na-arụ ọrụ ezi iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air-agba ọsọ Mac OS X Snow agụ owuru, odum wdg
Atụmatụ: N'ezie, nke a omume na-enyekwa gị ihe niile nkịtị video edezi ngwaọrụ. Ọ bụrụ na mkpa, i nwere ike ozugbo dezie gị vidiyo na ngwa a.
Ịmatakwu banyere Final Cut Pro:
Site tech spec nke Final Cut Pro, anyị maara na anyị nwere ike "na-eji Abanye na Nyefee ọrụ na Final Cut Pro ka ingest Panasonic AVC-intra na DVCPRO HD si P2 kaadị, Sony XDCAM Ọpụ, na AVCHD. Ma ọ bụ iji Sony si free XDCAM Nyefee na software ingest XDCAM, 18-, 25-, na 35-Mbps XDCAM HD, na XDCAM HD 422 media. " Iji mara nkọwa, ị nwere ike gaa tech spec nke Final Cut Pro. Na mbubata MTS ka Final Cut Pro maka inwekwu edezi, ị nwere ike na-ezo aka ọrụ ntuziaka nke Final Cut Pro na Apple.com.
Tọghata MTS ka QuickTime MOV: Ọ bụrụ na ị nwere nza nke MTS faịlụ, Ohere inweta bụ ị chọrọ iji tọghata gị igwefoto MTS videos ka QuickTime MOV usoro maka ojiji na Apple software dị ka QuickTime, iMovie na ngwaọrụ dị ka iPhone, iPad, iPod emetụ wdg
Tọghata AVCHD M2TS / MTS ka iTunes: AVCHD M2TS / MTS faịlụ-apụghị ozugbo dị ka iTunes. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye MTS ma ọ bụ M2TS video faịlụ ka iTunes maka faịlụ management ma ọ bụ syncing ka Apple ngwaọrụ, i kwesịrị iji tọghata M2TS / MTS ka iTunes akwado formats mbụ.
Import MTS ka Adobe Premiere: Wanna tọghata gị MTS faịlụ ka Adobe Premier-enweghị àgwà ọnwụ? Ewere ya na ya mere ebe a. Isiokwu a ga-enyere gị aka n'ezie tọghata MTS ka Adobe Premiere dakọtara formats, otú i nwere ike mbubata MTS faịlụ ka a ngwa n'ihi na video edezi na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Tọghata MTS ọ bụla Format on Computer: Wondershare MTS video Ntụgharị maka Mac-enye gị ohere iji tọghata MTS video faịlụ ka ọ bụla ọdịyo na video format, ọbụna ngwaọrụ wdg
Tọghata MTS ka ProRes: Ọ bụrụ na ị chọrọ iji tọghata MTS ka ProRes maka ire ụtọ edezi na FCP, iMovie, ma ọ bụ Adobe Premier, isiokwu a ga-egosi gị otú ime nke a ọrụ nzọụkwụ site nzọụkwụ. Dị nnọọ na-zuru ezu ndu ebe a.
Olee otú mbubata camcorder Videos Ndụ Movie Onye kere
Final Cut Pro X: Olee otú akuku ihe Image
FCP X: Iji tinye mmetụta
Nchọpụta nsogbu Atụmatụ maka Final Cut Pro X
Olee otú mbubata AVCHD ka ikpeazụ ịkpụ pro x on Mac?
FCP X: Mepụta a Chroma-Key (Green-ihuenyo) Mmetụta
Final Cut Pro X: Ifriizi-Frames na ngwa ngwa Motion
Top 40 Keyboard Uzo mkpirisi maka Final Cut Pro X
Jikwaa Libraries na Final Cut Pro X
Olee otú mbubata AVI Videos ka Final Cut Pro on Mac OS X (Yosemite gụnyere)